Kamsar - Wikipedia
Kamsar, Kabsar (Af-Carabi: القزبر ama Af-Carabi: التِّـقْـدَة; Af-Ingiriis: coriander) (magaca Sayniska Coriandrum sativum) waa geed cawseed sanadle ah (sanadkii hal mar dhasha oo miro keena) caleentiisa raashinka ama suugada lagu carfiyo.
1 Asalka iyo faafida
2 Tilmaanta geedka
5 Noocyo Kale
Asalka iyo faafidaEdit
asalkiisu asia iyo waqoyiga africa. waxaa laga helaa wadamada kulaala bada cad waxaa lagu beeraa hindia laatin america iyo yurub.. caleemihiisa iyo mirihiisa waxaa loo adeegsada noocyo badan oo ka mid ah cuntada. badanaa wuu koraa ilaa 50cm ama 20 inch.
waa dhir sanadle ah oo aad u caraf badan caleemihiisa iyo mirihiisa waxaa loo adeegsada noocyo badan oo ka mid ah cuntada. badanaa wuu koraa ilaa 50cm ama 20 inch. ubixiisu waa acadaan, wuxuu dhalaa miro jaalle ama midabka qaxwada u eg. kamsarta waxaa lagu daraa geed uduga raashinka.
cuntada, iyo noocyo daawooyinka ka mida ah, waxaa lagu daaweeya qabsinada caloosha, calool majiirka iyo dibirada caloosha. chineseka ayaa hore u soo isticmaali jiray romatisamka iyo xanuunada caloosha, sidoo kale waxay u adegsan jireen xanuunada kaadi-haysta.
Khudaarta Bisil (fruit)
Babaay · besbaaska · tamaandhada · saladhka · toonta · kaarootka · Liin Macaan · Liin Dhanaan · Liin Bambeelmo · Liin Qarboosh · Tufaax · Muus · Cambe · Canabka · Qare ·
Khudaarta Ceyriin (vegetable)
Barandhe · Basal · tamaandhada · toonta · Dabocase · Kamsar
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamsar&oldid=150766"
Last edited on 15 Diseembar 2015, at 00:59